Diskas - NuuralHudaa
On May 19, 2022 17
Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana keessatti kan argamu yoo tahu, maqaan isaa DISKAS jedhama. Diskas sanyii qurxummiiti. Hedduun keenya Ispoortii irratti maqaa discus throw jedhamu dhageenyee jirra ta’a. Discus throw jechuun gosa dorgommii ispoortiiti. Maqaan uumama kanaatis waanuma geengoo kanarraa argame. Qaamni isaa geengoo fi diriiraadha. Kanumarraa ka’uun qurxummii kanas Diskas jedhanii moggaasan. Sanyiin qurxummii kanaa sadihitu jira. Sadan isaaniituu garaagarummaa bifaa qaban malee, qaamni isaanii wal fakkaataadha. Bifti isaaniitis bakka jireenya isaanii irratti hundaa’ee garaagarummaa qaba.
Qurxummiin kun qaama geengoo kanarraa koola guddaa qaba. Afaan isaa xiqqaadha. Ijji isaatis xiqqaa fi bifa diimaa qaba. Halluun gogaa isaa sanyii irratti hundaa’ee garaagarummaa qaba. Gariin isaanii magariisa yoo ta’an, gariin ammoo bifa cuquliisaa akkasumas bifa magaalaa fi diimaa qabu. Qaama bifa garagaraa qabu kanarraa sarara irraan gadee sagal kan bifti isaa gurraachaatu argama. Kunis yeroo rakkoon uumametti, naanno jiran wajjiin akka gaararraa wal fakkaatuudhaan diina jalaa dhokachuudhaaf isaan garagaara.
Qurxummiin kun hedduminaan sulula laga Amaazoon keessatti argama. Qubsuma isaatiifis bishaan suuta yaa’u filata. Akkasumas bishaan asiidawaa, hoo’aa fi bakka qurxummiin biraa hedduminaan hin jiraanne keessa jiraata. Diskas qurxummii garee uumee hoomaan jiraatuu danda’u yoo ta’u, gareen tokko miseensota heddu of keessaa qabaatuu danda’a. Garee keessatti dhiiraafi dhaltuun walitti qindoomanii jiraatu. Uumamni kun yeroo heddu nageenyummaa isaatiin beekama. Garuu yoo qindiin isaa ykn ammoo ilmooleen isaa jalaa tuqamu akkaan dallana. Warri walitti qindoomee waliin jiraatu kun umrii isaanii guutuu akkasumatti waliin turu. Yeroo dhaltuun hanqaaquu buusuu barbaaddu, dhiirri ammoo bakka isiin itti hanqaaqxu qopheessaaf. Dhaltuun takkas yeroo takkaan hanqaaquu haga 400 hanqaaqxi. Eega hanqaaquun hanqaaqameen booda dhiirri sanyii isaa irratti dhangalaasa. Kana booda lameen isaanii wal gargaaraa, haga gaafa ilmooleen keessaa bahanitti walumaan kunuunsu.
Sooranni DIskas akkuma qurxummiiwwan hedduu, Waan argatee fi waan afaan isaa seenuu danda’u hunda ni soorata. Haa ta’u malee hedduminaan foon prootiinaan badhaadhe filata. Kanaafuu qurxummiiwwan isa irra xixiqqoo ta’an, raammolee bishaan keessaatiifi yeroo tokko tokkos, ilbiisota bishaan gubbaa qubatan ni soorata.
Diskas bishaan suuta yaa’u keessa qubata. Akkasuma bishaan sun margaa fi wantoota garagaraa kan jalatti dhokachuudhaaf tolu qabaachuu qaba. Kunis diina jalaa miliquudhaaf isa gargaara. Akkuma duraan isiniif himne, sarara gurraacha qaama isaa irratti argamu sanitti fayyadamee, naannoo jiru san waliin walfakkaatee diina jalaa miliquudhaaf yaala. Sababaa kanaaf wantoonni jalatti dhokatu isa barbaachisa.
Gama birootiin qurxummiin kun diina heddu qaba. Qurxummiileen gurguddoon, qocaan bishaanii akkasumas wantoonni bishaan keessa galan hedduminaan qurxummii diskas kana adamsanii sooratu. Dabalataanis, Simbirri halkanii fi Simbirrooleen birootis qilleensa gubbaa bishaanitti gad darbamuun adamsanii sooratu. Uumama isaan sooratu kanniiniin cinatti, ilmi namaatis diina biraati. Ilmi namaa bishaan isaan keessa qubatanitti balfa garagaraa naquun bishaan sun jireenya isaaniitiif akka hi mijjooyne godha. Haala Kanaan hedduun du’aniii, gariin ammoo qubsuma barbaacha baqachuudhaaf dirqamanii jiru.
Qurxummii kana adamsanii Aquarium keessatti kunuunsanii guddisuun salphaadha. Akkuma duraan jenne, fedhiin isaa bishaan tasgabbaahaa, hoo’aa fi asiidawaadha. Kanaafuu bishaan akkanaa kana yo qopheesinnef mana keenya keessatti kunuunsuu ni dandeenya. Yeroo ammaa kanas namoonni hedduun qurxummii kanaaf kunuunsa garagaraa godhurratti argamu. Akka qorannoon garagaraa mul’isutti qurxummiin kun sababa faalama qilleensaatiin rakkoo hamaa keessa jira. Kana oolchuuf kunuunsi akkanaa kunniin godhamuun isaa faaydaa guddaa qaba.
July 7, 2022 sa;aa 2:09 am Update tahe